I-iPhone 13: ukwazisa, amaxabiso kunye nazo zonke iinkcukacha zayo | IPhone iindaba
Sikulokugqibela ngaphambi kokubonisa kunye nokwaziswa kwe-iPhone 13 elandelayo, kwaye sifuna ukukushwankathela Yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga ne-Apple elandelayo ye-smartphone kwinqaku elinye esiza kulivuselela ngolwazi oluvela kwiiveki ezizayo.
1 Umhla wokukhutshwa kwe-IPhone 13
2 Iimodeli ze-IP 13 kunye ne-13 Pro Max
3 Uyilo lwe-iPhone 13 entsha
5 Iimpawu ezithathwa ngokungakhathali
5.2 I-ID yobuso
5.4 Ibhetri kunye nokutshaja
5.5 Ezinye izinto
6 Ixabisa malini i-iPhone 13?
Emva kokulibaziseka ekumiselweni kwe-iPhone kulo nyaka uphelileyo, ngenxa ye-COVID-19 bhubhane, kulo nyaka kubonakala ukuba ukuboniswa kwayo kunye nokuqaliswa okulandelayo kuya kwenzeka kwangoko. Kuyinyani ukuba kulo nyaka imeko yesifo iguqukile kodwa zininzi iingxaki ngokubonelelwa kwee-microchips, nangona kunjalo kukho amarhe aqinisekisa ukuba I-TSMC ibeka phambili imveliso yeAppleKwaye ukuba sidibanisa kule nto ukuba ibhlokhi yeHuawei iyanciphisa ukuthengisa kakhulu, kunokuba kunjalo ukuba i-iPhone ayinangxaki yokunqongophala kwezinto.
Ngale nto yonke, umhla wokukhutshwa kwe-iPhone 13 kuzo zonke iimodeli zayo ingaqhubela phambili kwinyanga kaSeptemba. Amarhe akhombe NgoSeptemba 17 okanye 24 njengeyona mihla inokwenzeka Qalisa. Ukuba umhla wokuqala uqinisekisiwe, ukuhanjiswa kwawo kuya kwenzeka ngoLwesibini, nge-7 kaSeptemba (Sele siyazi ukuba iApple ithanda njani uLwesibini ngeziganeko zayo) ngokuqala kokubhukha ngolwesiHlanu olandelayo, nge-10 kaSeptemba, kunye nokuthengisa ngokuthe ngqo kwiivenkile ezibonakalayo nakwi-Intanethi ngoSeptemba 17 Le mihla, njengoko sisitsho, inokulibaziseka ngeveki ukuba ukuthengiswa ngokuthe ngqo bekungoSeptemba 24.
Iimodeli ze-IP 13 kunye ne-13 Pro Max
Rhoqo ngonyaka kukho impikiswano efanayo malunga negama le-iPhone entsha. Yiyo kuphela ifowuni ye-Apple efumana inombolo egameni layo, ibonisa ngokucacileyo imodeli esithetha ngayo. I-iPad Pro, i-iPad Air, i-iPad, iMacBook, iMac ... I-Apple ayilandeli le khrayitheriya inye xa ibiza yonke ikhathalogu yemvelisoKe iminyaka embalwa kuye kwavakala ukuba i-iPhone inokulishiya inani kwaye ibizwe ngokuba yi-iPhone kuphela. Kodwa kubonakala ngathi kulo nyaka ayizukubanjalo, kwaye iya kuqhubeka nenani kwinxalenye yokugqibela yegama layo.
Umbuzo oseleyo ngulo Ngaba iya kubizwa ngokuba yi-iPhone 12s okanye i-iPhone 13? I-iPhone 11 yalandelwa yi-iPhone 12, hayi i-11s, mhlawumbi ngenxa yokuba ayizikhumbuli izehlo zolo suku lumnandi e-United States, okanye kungenxa yokuba le modeli intsha izise utshintsho loyilo olwahlulahlula ngokwaneleyo ngaphambili. Le iPhone 13 intsha kulindeleke ukuba ingazisi utshintsho olukhulu xa kuthelekiswa ne-iPhone 12, kodwa Amahemuhemu abonisa ukuba ayizukubizwa ngokuba yi-iPhone 12s kodwa i-iPhone 13.
Zeziphi iimodeli eziza kubakho kule iPhone intsha? Uninzi lwabahlalutyi bayavuma oko aluyi kubakho utshintsho xa kuthelekiswa nesizukulwana sangoku kwaye ke ngoko i-iPhone nganye ye-12 iya kuba nendlalifa yayo kulo nyaka:
I-iPhone 13 mini: enescreen se-5,4-intshi, ophumeleleyo kwi-iPhone 12 mini.
I-iPhone 13: ene-6,1-intshi yesikrini, oza kungena ezihlangwini ze-iPhone 12.
IPhone 13 Pro: enescreen se-6,1-intshi, oza kungena ezihlangwini ze-iPhone 12 Pro.
I-iPhone 13 Pro Max: ene-6,7-intshi yesikrini, oza kungena ezihlangwini ze-iPhone 12 Pro Max.
Kubonakala ngathi ukuthengisa okungalunganga kwe-iPhone 12 mini akuyi kuchaphazela ukuqhubeka kwayo ngaphakathi kuluhlu lwe-iPhone kulo nyaka ukuba siqwalasele amarhe amva nje, nangona kusekho abo baqinisekisa ukuba ayizukuphinda ihlaziywe kulo nyaka. Ngaphandle kwamathandabuzo imodeli ebanjiswe kakhulu ngezikhonkwane zoluhlu lonke. Ngokubhekisele kwi-iPhone SE, akuyi kubakho luhlaziyo kule 2021, kwaye kuya kufuneka silinde de kube ngu-2022 ukuze sibone imodeli entsha esisinikwa yiApple.
Uyilo lwe-iPhone 13 entsha
I-Apple iya kongeza utshintsho oluncinci kuyilo lwee-iPhones ezintsha. Baza kuqhubeka ngemigca eglasi, into ebalulekileyo ekutshajiseni ngaphandle kwamacingo ukuba isebenze, kunye nemiphetho ethe tyaba, njenge-iPhone 12. Ngaphambili siya kuqhubeka nescreen esihlala ngaphambili, kwaye "inotshi" ephawule i-iPhone okoko i-iPhone X izakubakhona, nangona kuncitshiswa ubungakanani Enkosi ekubekweni kwesithethi esitsha. Kule mizekelo mitsha Isandisi-lizwi asizukuhlala embindini wenotshi Endaweni yoko iya kubekwa kumda ongaphezulu kwesikrini, ishiye indawo engaphezulu yekhamera yangaphambili kunye nawo onke amacandelo eFaceID, ukuze ububanzi bayo buncitshiswe.
Imilinganiselo ye-iPhone entsha iya kufana neemodeli zayo zangoku, kuphela ubukhulu obuya konyuswa kancinci, malunga ne-0,26 mm, into esingayi kuqaphela xa sinayo ezandleni zethu, kodwa enokusinika ingxaki ngezimbozo zeemodeli zangoku. Ngayiphi na imeko, iimeko ze-iPhone 12 azizukusebenzela i-iPhone 13 entsha, kuba imodyuli yekhamera iya kuba nkulu.
Kungoku nje kule nxalenye ye-iPhone apho utshintsho oluncinci kulo nyaka luza kubonakala, kuba iinjongo ziya kuba nkulu kwaye ziya kubonakala ngakumbi kunakwisizukulwana sangoku, ke imodyuli, njengoko besesitshilo ngaphambili, iya kuba nkulu . Amanye amarhe athetha ngolungelelwaniso olutsha lweelensi ze-iPhone 12 kunye ne-12 mini, eziya kuqhubeka ukuba zimbini kuphela. Ithuba lokuba iinjongo ze-2/3 (kuxhomekeke kwimodeli) zikhuselwe yikristale enye yesafire, endaweni yokuba zenziwe ngokukodwa kwiimodeli zangoku, sele kuxoxiwe.
Asifuni ukusilela ukukhankanya ukubakho malunga nesixhumi sombane se-iPhone 13 entsha, kuba nangona kubonakala kungenakulindeleka, bekukho amarhe ambalwa malunga nokuba ubuncinci imodeli enye ayinalo naluphi na uhlobo lwesinxibelelanisi. Inkqubo yeMagSafe ekhutshwe kunyaka ophelileyo ayizukusebenzela kuphela ukutshaja isixhobo kodwa kunye nokuhanjiswa kwedatha. Njengoko sisitsho, kubonakala ngathi yinto enokuza kungekudala kodwa ayinakulindeleka kulo nyaka.
Imibala ye-iPhone entsha ihlala ivelisa amarhe amaninzi ejikeleze bona, nangona kamva ingaqinisekiswanga kwiimeko ezininzi. Ngokuqinisekileyo amahemuhemu anesiseko, U-Apple wenze uvavanyo oluninzi ngemibala eyahlukeneyo ngalo lonke ixesha lokuphuhliswa kwee-iPhones ezintshaUkushiya umbala omtsha okanye ezimbini ekugqibeleni, kungcono. Okwangoku i-iPhone 12 iyafumaneka ngombala omhlophe, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, omfusa kunye nobomvu, ngelixa i-iPhone 12 Pro ikwi-graphite, isilivere, igolide neblue.
Ngeemodeli ezintsha ze-iPhone sizakuqhubeka sinolona luhlu lwemibala, nangona ezinye ziza kutshintshwa. Yiyo loo nto kwi-iPhone 13 Pro grafayithi iya kunika indlela emnyama emnyama, que ingabonakala imnyama kakhulu kunemodeli yangoku, yona engwevu ngakumbi. Kukho intetho ngombala wobhedu, iorenji engaphezulu kunegolide ekhoyo ngoku. Kwaye kwimeko yeemodeli "ezingezizo i-Pro", umbala wepinki unokufakwa, kodwa kubonakala kuyingozi kakhulu.
Iimpawu ezithathwa ngokungakhathali
Izikrini ziya kugcina isisombululo esifanayo nesangoku, kunye nobukhulu obufanayo. Into elindelekileyo yile, kulo nyaka ewe, inqanaba lokuhlaziya eli-120Hz liyafika, nangona kulinganiselwe kwiimodeli zePro, zombini ngo-6.1 no-6.7 intshi. Izikrini ziya kuba zezohlobo lwe-LTPO, eya kuthi inciphise ukusetyenziswa kwamandla nge-15 ukuya kwi-20%. Olu hlobo lwetekhnoloji lukwenza ukuba kuncitshiswe inani lezinto eziphantsi kwescreen, ukuze kufumaneke indawo engaphezulu kwezinye izinto (ibhetri, umzekelo).
Kwiintsuku zamva nje kukho intetho ukusebenza kwescreen esitsha, "Ihlala iboniswa" okanye iscreen sihlala sivuliwe, njengakwi-Apple Watch evela kuthotho lwe-5. Ukuncitshiswa kokusetyenziswa kwamandla kwezikrini ze-LTPO kunokuhlawulela ukusetyenziswa okuphezulu okuya kuba neli nqaku, eliza kukuvumela ukuba usoloko ubona ulwazi lwescreen nge-iPhone itshixiwe.
I-iPhone 13 iya kugcina ukubonwa kobuso njengenkqubo yokhuseleko yokuthenga, ukuhlawula nge-Apple Pay kunye nokuvula isixhobo. Kwiintsuku zamva nje, kuye kwavela amarhe athi I-iPhone 13 ingaqala inkqubo entsha yokwamkelwa kobuso ukuba iyakusebenza nkqu nemaski ivuliwe, eya kuba sisikhuthazo esibalulekileyo sokuhlaziya i-iPhone kulo nyaka.
Iphantse yagwetywa into yokuba i-iPhone entsha inenkqubo yokuqaphela iminwe, okanye i-ID yokuChukumisa, ngaphandle kwenyani yokuba inokuba sele ivavanya inkqubo kwezinye iiprototypes ze-iPhone 13. Kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba le iPhone intsha ibandakanye eli nqaku, kwaye kuya kufuneka silinde ubuncinci unyaka, ukuba ekugqibeleni ibandakanyiwe.
Iya kuba lelinye lamacandelo eliya kuzisa iindaba ezininzi, kunye nophuculo kulo lonke uluhlu, nangona lubaluleke ngakumbi kwi-13 Pro kunye nePro Max. Ezi modeli ziya kubandakanya into entsha ye-6 ye-lens ebanzi ye-engile, Xa kuthelekiswa nezinto ezi-5 ezikhoyo ngoku. Oku kuyakuchaphazela ukuphuculwa komgangatho weefoto ezifunyenwe ngale lens, eya kuthi incede ukufakwa kwe-autofocus, ngoku engekhoyo, kunye nendawo enkulu ye-f / 1.8 (okwangoku yi-f / 2.4).
Los Iithagethi ziya kuba nkulu, kungoko ukwanda kobungakanani bemodyuli Iikhamera. Oku kuyakuvumela ukungena kokukhanya okukhulu ukuze kufumaneke umgangatho ophucukileyo kwiifoto ngokukhanya okungatheni. Ukongeza, ubungakanani benzwa buya kuba bukhulu, buxhome ukukhanya ngakumbi. Yonke into ibonakala ibonisa ukuba iApple ifuna ukuba kulo nyaka iphucule iifoto ezifakwe kumgangatho ophantsi wokukhanya.
Olu phuculo lwamva nje alucaci kuthi ukuba luza kubakho kuzo zonke iimodeli ze-iPhone, okanye ukuba ziya kugcinelwa kuphela iimodeli zePro. ukuphucula uzinzo lomfanekiso, ukuze ubandakanywe kwisenzisi, ukushiya uzinzo lwe-optical, ukufumana iifoto kunye neevidiyo ezingcono. Yintoni ebonakala ngathi iqinisekile yile Inzwa ye-LiDAR iya kuba ye-iPhone 13 Pro kuphela.
Kuza kubakho iindlela ezimbini zekhamera, enye ifoto, ukuthatha izifinyezo zesibhakabhaka ebusuku. Oku kungachaza uphuculo oluninzi lujolise kukukhanya okuphantsi kunye neefoto ezibanzi ezibanzi. Enye imowudi entsha iya kuba yividiyo, ngesiphumo sokufiphala esifana nemowudi yemifanekiso yokufota, onokuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde emva kokuziqhelanisa nobunzulu bentsimi.
Ibhetri kunye nokutshaja
I-iPhone 13 entsha inokuqalisa iteknoloji entsha ebizwa ngokuba "yibhetri yebhodi ethambileyo", ekuvumela ukuba wenze iibhetri ezinemiqolo embalwa, egcina indawo yangaphakathi kwi-iPhone. Ngale ndlela, amandla ebhetri anokunyuswa ngaphandle kokunyusa ubungakanani be-iPhone. I-iPhone 13 Pro Max iya kuba yeyona iya kufumana ukonyuka okukhulu kwebhetri, efikelela kwi-4,352mAhNgelixa ezinye iimodeli ziya kubona ukonyuka okuncinci.
Akubonakali ngathi kuya kubakho utshintsho kwiinkqubo zokutshaja, zombini ii-wired kunye ne-wireless. I-Apple yazisa ngenkqubo ye-MagSafe nge-iPhone 12, efikelela kwi-15W yamandla, ngelixa ngentambo owona mthwalo ungaphezulu yi-20W. Ngaphandle kokumangaliswa, ezi datha ziya kuhlala zingatshintshi kwi-iPhone 13 entsha. Abalindelwanga ukuba babize umrhumo oguqukayo, okanye ubuncinci hayi ukuhlawulwa umva okubavumela ukuba basebenzise njengesiseko sokutshaja seQi. Sele siyazi ukuba i-iPhone 12 ibuyisele umva ukutshaja kodwa inikwe umda ekuvuseleleni ibhetri entsha yeMagSafe esandula ukwenziwa yiApple.
Kucingelwa ukuba i-iPhone 13 entsha iyakubandakanya iprosesa ye-A15 Bionic, eyokulandela i-A14 Bionic ngoku efakwe kwi-iPhone 12. Esi sizukulwana sitsha singabandakanya "inkqubo entsha kwi-chip" (SoC) engayi kuphucula kuphela ukusebenza kwesixhobo, ukudubula amandla aso njengoko kwenzekayo kwisizukulwana emva kwesizukulwana, kodwa kukwonyusa ukusebenza ngokuncitshiswa kokusetyenziswa kwamandla.
Ukugcina ngokuqinisekileyo kuya kuhlala kungatshintshi, ukuqala nge-64GB y ubuninzi be-512GB. Kukho amarhe malunga nokwandisa ubungakanani be-boot ukuya kuthi ga kwi-128GB, ezinokuba ziindaba ezimnandi kwaye zingaphaya kokuqonda, kodwa kubonakala ngathi akunakwenzeka. Ithuba lokuba i-iPhone 13 inokunyuka iye kwi-1TB yokugcina kwiimodeli zePro nayo ibonakala intle kakhulu.
Zonke iimodeli ze-iPhone 13 iya kuba noqhagamshelo lwe-5G, kwaye iya kusebenzisa imodem yeQualcomm X60. Ukuphunyezwa kolu hlobo lwenethiwekhi kusesemngciphekweni kumazwe amaninzi, nangona kulindeleke ukuba i-2022 ekugqibeleni ibe sisiqalo sokwanda kwayo ngokubanzi. Ngokubhekiselele kunxibelelwano lweWiFi, iya kuhambelana neenethiwekhi ezintsha zeWiFi 6E, eyongeza ibhendi ye-6GHz kwaye iphucula i-WiFi 6, okwangoku kwisigaba sokuqala sokuphunyezwa.
Ixabisa malini i-iPhone 13?
Akukho tshintsho lwamaxabiso lilindelweyo, ke I-iPhone 13 isaza kuxabisa ngokufanayo ngaphezu kwesizukulwana sangoku.
I-iPhone 13 mini ukusuka kwi- € 809
I-iPhone 13 isuka kwi- € 909
IPhone 13 Pro isuka kwi- € 1159
I-iPhone 13 Pro Max ukusuka kwi- € 1259
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » I-iPhone 13: ukwazisa, amaxabiso kunye nazo zonke iinkcukacha zayo
Yiza, ukuba unayo i-iPhone 12, i-13 ayifanele, ngokuhambelana neselfowuni efanayo
Njengonyaka wonke, akukho nto itshintsha ukusuka kwi-11 kuye kwi-12, babeka umazibuthe ngasemva
Ewe, ukuba une-11 kunye no-10 ikwayinto enye, abasenakho ukwenza into entsha.
Ewe akufanelekanga ukuthenga i-iPhone 13. Oko kuyonyusa ibhetri iye kwi-4300 mha. I-iPhone Fold kunye ne-iPhone 14 iya kuba yenye into. Ukongeza, iinkampani ezinkulu ngoku zisebenzisa ii-4n chips, ngowama-2023 siza kuba nee-chips eziyi-3, oko kunomdla!
Iibhetri ziya kusebenzisa igrafite Ndicinga ukuba bathini? Iibhetri ziya kuhlala phantse iveki.